Saturday December 01, 2018 - 19:03:53 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Isbitalka weyn ee degmada Saakow ayaa waxaa lagu billaabay dib u dhis kadib muddo laba bilood ah oo ay guddigu uruurinayeen lacago tabarrucaad ah oo ay ku deeqayeen dadka muxsiniinta ah ee Soomaaliyeed.
Gudiga ayaa usbuucii lasoo dhaafay ku shaqo billaabay kharashaadkii usoo xarooday, waxaana si hab sami leh ku socota hawsha dhismaha.
Gudigu waxay sheegeen in maalmaha soo socda ay ka war bixin doonaan halka ay wax u marayaan iyo sida loo dhisayo isbitalka.
Isbitalka Saakow ayaa waxaa duqeeyay dayuurado shisheeye bishiiSeptember 19, 2018. waxaa ku burburay dhammaan dhismihii Isbitalka sidoo kale dugsi u dhawaa ayay sidoo kale ku dileen sadax caruur ah.
Mudada uu isbitalku burbursan yahay ayaa waxaa gabi ahaanba istaagay adeeggii uu u hayay bulshada, taasoo keentay in boqollaal tuulo oo ku xirnaa ay dawo u doontaan gobollo fog-fog oo uu dhaqaale badan kaga boxo.
Haddaba ciddii la baxaysa tabarrucaadda waxay ku hagaajin kartaa Tel: Nambarada guddiga dhismaha Isbitaalka Saakow oo ah sida soo socota:-
deg deg: Al Shabaab oo sheegatay Mas'uuliyadda qarax lagu beegsaday saldhig melleteri oo kuyaal magaalada Muqdisho.